छुवाछुत बिरुद्धको दुधको पेशा – मझेरी डट कम
बि सं २०१८ साल देखी नै राजा महेन्द्र कै पालामा तराइका सम्म फांटहरुमा नयाँ बस्ती बसाउन सुरु भयो । बर्मा बाट थुप्रै नेपाली हरु खेदियर नेपाल पसे । सुरुमा बडो दु:खका साथ जंगल बिनास गरी बस्ती बसाउन योग्य भुमी बनाइयो । चितवन -नवल परासी – कपिलवस्तु -रुपन्देही आदी जिल्ला हरुमा तत्कालिन पुनर्वास कंपनिले आफ्नै तरिका बाट बस्ती बसाइदियो । यसै क्रममा जनघनत्वको चाप र नेपालको मध्य पश्चिम पहाडी भेगका मानिसहरु बेरोजगारिको मारमा परेका थुप्रै मानिसहरु मधेस झरे । बस्ती बस्यो । क्रमस नारायण घाटमा पुल पनि बन्यो । नारायण घाट बजार पनि भरी भराउ भयो । चितवन मा बस्ने किसान हरु र पुर्वी नवल परासीमा बस्ने किसान को लागि नारायणघाट बजार एउटा ठुलो ब्यापारिक् केन्द्र सोपिङ सेन्टर पनि बन्यो । क्रमस हेटौंडा दुग्ध बिकास संस्थान ले चितवन मा चिस्यान केन्द्र पनि राख्यो । चितवन का किसान हरुले उक्त चिस्यान केन्द्रमा दुध बेच्न थाले ।
यातायातको सुबिधा भयको हुनाले नवल परासिको केही किसान हरु पनि दुध बेचेर लाभान्वित हुन पुगे । तरकारीहरु फलफुल हरु बेचेर पनि मानिसहरुले आफ्नो सांझ बिहानको जोहोगर्न सफल भय । तर हरिया फलफुल र सागपात बाहेक पशुपालन तथा दुग्ध ब्यवसाय अथवा दुध बेच बिखन गरी आफ्नो जिविका चलाऊन त्यहाको यक खाले समाज भने बन्छित थियो । चितवन मा चिस्यान केन्द्र राख्नु पुर्व चितवनकै दलित भनिने बर्ग हरुको दुध बजार मा जती सुकै स्वच्छ ताजा भय पनि बिक्री हुँदैनथ्यो । पछी संस्थान ले दुध खरिद गर्न थालेदेखि मात्र चितवन का दलित किसान ले दुध बेच्न सफल भयका थिय । फेरी पनि गाउमा जन्ती मलामी खुवाउन पर्‍यो भने डायरिको दुध त लिनु हुन्न भन्ने जातिय छुवाछुत को भावना राखी गाउले पाइकरी (गाउबाट दुध किनी बजारमा बेच्ने ) बाट आधा पानी भयको दुध चोखो मानिन्थ्यो र त्यही दुध किनिन्थ्यो । यो यथार्थ सत्य कुरा हो ।
कुरा झन्डै २०५१-५२ को तिरको हो त्यसताका सरकारी दुध डेरी बाहेक प्राइभेट डेरीको पनि थालनि भयो । पञ्चायत पालाका राष्ट्रिय पंचायत् सभासद समेत् रहेका पिताम्वर थापा मगरले नारायणघाटमा महालक्ष्मी डेरी नाम बाट एउटा दुध डेरी स्थापना गरे । उक्त दुध डेरिमा नवल परासी को अमरापुरि गा वि स बाट मैले पनि दुध बेच्ने जमर्को गरी मेरो घरको ३ लिटर दुध लाई आधार बनाइ अरु गाउलेको दुध पनि पिताम्वर थापाको डेरीमा बेची पर्ती लिटर रु १ मुनाफा लिने सर्तमा गाउलेको दुध खरिद गर्न थालें ।क्रमस दिनानु दिन दुध बढ्दै गयो । स्मरण रहोस त्यस बेला त्यसगाउमा अन्य ४ जना पाइकरी (दुध ठेकेदार) पनि गाउले संग दुध किनी बजार का चिया पसलेहरु लाई बेच बिखन गर्थे । तैपनी त्यस गाउका दलित बर्गले दुध ब्यवसाय बाट जिविका गर्ने आट गर्न भने सकेका थियनन । ३ लिटर बाट सुरु गरेको मेरो दुधको पेसा झन्डै ३७० लिटर सम्म भयो । पिताम्वर थापाको डेरिले मेरो मात्रै दुध खरिद गर्न पनि सकेन । त्यस बाट बचेँको दुध यज्ञपुरीफारम (चितवन चिस्यान केद्र ) मा बिक्री गर्न थालें । स्मरण रहोस ३ फ्याट २९ ल्याक्टोमिटर देखी माथिको दुध मात्र खरिद बिक्री गरिन्थ्यो । आठ- यस यन यफ अथवा फ्यट र ल्याक्टो को जोड लाई चार ले भाग गरी आयको शेस लाई (सोलिड बट नट फ्याट ) यस यन यफ भनिन्छ र यो दुध गुणस्तरीय दुध मानिन्छ ।
गाउमा चार जना संग प्रतिस्पर्धा गरी गाउलेको चित्त बुझाई गुणस्तरीय दुध त्यसताका डेरिमा लानु सानो मेहनत को कुरा थियन । पिअर दुध खान त पाडो भयर जन्मिनु पर्छ भन्ने गाउले किंबदन्ती लाई चुनौती दिदै गुणस्तरिय दुध डेरीमा पुर्याउने र त्यस गाउका जनता लाई दुध डेरिको बारेमा थुप्रै जानकारी समेत गराइ सकेको थियं । त्यस समय सम्म पनि त्यस गाउका दलित हरुले दुध बिक्री गर्न पायका थियनन । दुध को पेसा एस्तो पेसा हो जुन पेसा बाट अप्रत्यक्ष रुपमा अत्यधिक मात्रमा फाईदा हुन्छ । पिअर दुधले आधा पानी हजम गरेर पनि उस्तै देखिन्छ । गाउले को पिअर दुध गाउले लाई नै आधा पानी राखेर जहाँ अझै पनि कारोवार हुने गर्छ। तर डेरीसंग यस्तो कारोबारले भने मेल पटक्कै खांदैन । किनकी डेरिमा गुणस्तरीय दुधको मात्र कारोवार हुने गर्छ ।
कुरा त्यती खेरैको हो गाउले बाहुन छेत्री हरुले दुध बेचेर राम्रै आय आर्जन गर्थे । तर त्यस गाउका दलित हरुको दुध लिने आट भने कुनै दुध ब्यापारिको थियन । मेरो दुध संकलन केन्द्र बाट पनि थुप्रै गाउले हरुले जन्ती मलामी लाई खिर खुवाउन दुध लाने गर्थे ।यसरी डेरी भन्दा बाहिर दुध बेच्दा निकै नाफा हुन्थ्यो । यसै क्रममा यक दिन त्यस गाउका लाल बहादुर बि क लाई पनि दुध बेचेर आफ्नो घर को जोहो गर्ने इच्छा भयछ उनले धेरै चोटि अरु गाउले दुध बिक्रेता लाई पनि कुरा गरेका रहेछन तर अरुहरुले पुरुशोत्तम कम्युनिस्टहो कम्युनिस्ट ले छुवाछुत मान्दैनन शायद उनले तिम्रो दुध किन्छन होला भनी सिकायका रहेछन र लाल बहादुर ले पनि अघिल्लो दिन सांझ एउटा सोच बनायछन । पुरुशोतम सुबेदी कमुनिस्ठ मा लागेको केटा हो शायद उसले मेरो भैंसीको दुध किनिदिन्छ होला भनेर भोली पल्ट बिहान मेरो घरमा गयर कुरा गर्ने सोच बनाएर सुतेका रहेछन । भोली पल्ट म पनि घर बाट हातमा सकी नसकी ठुलाठुला आल्मोनियम का ढोल झुन्ड्याइ दुध भर्ने स्थान तिर लाग्ने जमर्को गर्दै थियं । लालबहादुर बि क टुप्लुक्क दैलोमा आईहाले । य पुरुशोत्तम बावु यक छिन पर्ख त ? मैले पनि बिहानै मेरै घरको साम्ने कोही पाहुना आउछ भने कुनै समस्या पर्‍योकी के भयो भनी अली स्तब्ध भयं । लाल बहादुर बि क लाई अरु कसैले ज्याक लगाइ कम्युनिस्ट लाई दलित को दुध भर्न लगाइ छुवाछुतको पंगा लियी झगडा गराइ दुध कालेक्सन सेन्टर नै हत्याउने उद्यस्यले कसैले पठायको रहेछ । त्यस बखत लाल बहादुर बि क ले पुरुशोत्तम सुबेदी ले मेरो दुध किनी दिन्छ भन्ने सोच बाट आयका भने रहेनछन । म पनि मेरो घरको पालिमा राखियका बेन्च मा बसें र लाले दाई किन यतिका बिहानै मकहां आउनु भयो त? भनी मैले शोधें । लाल बहादुरको हसिलो अनुहार थियो उनले पुरुशोत्तम बावु तिमी कम्युनिस्ट हौरे छुवाछुत लाई मान्दैनौ रे त्यसैले म पनि २-४ लिटर दुध बेचुकी भनेर आयको बावु हुन्छ कि हुन्न होला बावु ?उनको प्रश्न थियो ।
सन १९८० देखी झन्डै सन १९८८ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा बसी ड्राइवरि पेसा सिकी आफ्नै इच्छा मा भारतीय ग्रामीण तथा लघु उधोग मा ४० महिना प्राइभेट सेक्टर बाट तालिम लीइ नेपाल मा साना घरेलु उध्योग संबन्धी कुन ठाउमा कुन उध्योग चल्छ भन्ने जानकारी सहित् कती पुजीं ले कुन उद्योग कहाँ संभव हुन्छ भनी गरेलु तथा साना उद्योग नामक पुस्तक र सिक्षित नेपाली नारी हरुको लागि महत्व पुर्ण कोसेली अचार संसार अचार् उद्योग नामक पुस्तक समेत प्रकासित गरी सकेको अवस्थाको पुरुशोत्तम लाई लाल बहादुर बि क को दुध किनेर डेरिमा लैजानु कुनै ठुलो कुरा थियन । किनकी छुवाछुतको भावना लाई दिल्ली बाटै दुर गराइ सकेको थियं । लाल बहादुरको कुरा यकै बचनमा स्विकारदा उनि पनी अचम्मित भय । बावु यसरी सजिलै हामी कामी हरुको दुध तिमीले लिन्छौ भन्ने थाहा भयको भय मैले पोहोर साल देखी नै तिमी लाई नै दुध दिने गर्थे नि बावु । लाल बहादुर ले आजै २ लिटर दुध दुहेर ल्याउने बचन् दियर त्यहा बाट आफ्नो घर लागे तर त्यस दिन भने लाल बहादुर ले दुध भने ल्यायनन । उनले त्यो दिन खुब प्रचार गरे मेरो पनि अब देखी त्यही पुरुशोत्तम भन्ने मान्छेले दुध किन्ने भयो अब म पनी भोली देखी दुध बिक्री गर्न थाल्छु उनको त्यो दिन त्यसरी नै गयो । म पनि बिहान दुध भरेर मेरो यक जना कर्मचारी थिय अर्जुन चापागाइ उनी संग डेरी पुगे दुध ॠषिभ गरायं अनी फर्केर घर आयं । आउँदा बित्तिकै गाई गुइ केही कुरो कतै सुन्न परि हाल्यो कि अब त्यस लाई मात लाग्यो । गरी खाओस भनी त्यसको ढोलमा दुध खन्यायको हो । अब दमै कामी सार्किको दुध लान्छ भने हामीले दुध दुन्नम भन्ने हल्ला गाउमा फिजीइ सकेको छ । बिचरा लाल बहादुर ले यक दिन पनि दुध बेच्न पायका छैनन गाउमा ठुलो छुवाछुत को हुरी चल्यो । यो हुरी चलाऊन मद्घत पुर्याउने काम पहिलो दिन उनै को मुख बाट भयको थियो । रातारात अब पुरुशोत्तम लाई दुध नदिने सल्लाह भयछ । भोली पल्ट बिहान दुध भर्न जांदा झन्डै ८० लिटर दुध काम आयो । लाल बहादुर बि क ले पनि २ लिटर दुध लियर आय । अन्य कोही भने अब पुरुशोत्तम लाई दुध बेच्न हुन्छ तर बिया बारीमा यो सितको दुध भने लिन हुन्न भन्ने हरु पनि निकै थिय त्यहां । यदी लाल बहादुर को दुध नलियको भय मेरो दुध को पेसामा कुनै धक्का लाग्ने थियन त्यस दिन देखी मेरो दैनिक दुधको पेसामा झन्डै यक सय रुपैया को नोक्सानी भयको थियो । क्रमस गाउलेले मलाई दलित को दुध लियो भनेर उनिहरुले दुध दिन छोडेको ताजै जस्तो लाग्छ । पैसा र रुढिबाद लाई अगालेको भय शायद म अहिले पनि त्यसै गाउमा दुध कै पेसामा सिमित हुन्थे होला । तैपनी यक जना सचेत नागरिक ले समाजमा रहेको अनावश्यक जातिय रुढिबाध लाई चिर्न पहल गर्नु मेरो मानविय कर्तब्य थियो । जातियता बाट ग्रसित समाजमा बिकसका कुनै पुर्वाधार गत कांग्रेस एमालेकै पालामा अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था थियन । समाजमा अझै पनि कतै बोक्सिको आरोपमा मान्छे मारिने पिटिने आदी घटनाले देस अझै ग्रसित छ। पैसा कमिन्छ भनेर जे पनि गर्न तयार नेपाल मा रुढिबाद ले भने जरो गाडेकै पाईन्छ ।मेरै गाउमा मैले मैन बत्ती उद्योग खोली बिभिन्न कलात्मक मैन बत्ती जस्तै राम सिताको मुर्ती- बाँदर मकैको घोगा आदी कलात्मक मैन बत्ती बनाएर घरेलु उद्योग लाई बढावा दिन खोज्दा राम सिताको मुर्ती लाई नांगो मुर्ती बनाइ महिलाको खिल्ली उडायको भनी मुद्दा हाल्छउ भन्ने र एउटा उद्योग लाई नै धारासाही गराउन खोज्ने केही महिला आज त्यसै गाउमा अर्ध नग्न अवस्थामा हिंड्ने गरेको पनि ताजै उदाहरण छ । यसरी हाम्रो समाज अझै पनि अर्ध चेतनसिल अवस्थामा गुज्रियको छ। के सहि हो र के गलत भन्ने छुट्याउन नसक्नु शिक्षा कै कमी हो जस्तो मलाई लागेको छ ।